Udliwanondlebe lweKlabhu yeeDiners: Ukwakha uphawu lweNtlalontle | Martech Zone
NgoLwesibini, Aprili 9, 2013 NgoLwesibini, Aprili 9, 2013 Douglas Karr
Iqela leDiners ngumxhasi we Imithombo yeendaba yeNtlalontle yeHlabathi kwaye bendinodliwanondlebe nezinye zezithethi izolo (kwaye sizakwenza ngakumbi namhlanje). Ndikonwabele ukuthetha no UEduardo Tobon kwaye ndixoxe ngenkqubela phambili endiyibonileyo kwindawo yokuthengisa kwi-Intanethi.
Umbuzo wokuqala wawumalunga nokubhloga ngokuhlangeneyo kunye neengcebiso ezi-3 endizokubonelela ngazo. Ukuba bendinengqondo, ngendithe ndithenga eyam UkuBhloga ngokuBumbeneyo incwadi :). Andikholelwa ukuba ndiwugubungele ngokupheleleyo lo mbuzo ke ndiza kuyenza apha:
Phuhlisa isicwangciso somxholo kwaye ucwangcise ukuba ngabaphi abaphulaphuli ekujoliswe kubo kwaye uza kulinika njani ixabiso nomxholo wakho kubo kwi-intanethi.
Sebenza nomcebisi nge-SEO ukukunceda uchonge amagama aphambili kunye nokwandisa ibhlog yakho ukuze uqiniseke ukuba ulungelelaniswe ngokufanelekileyo ziinjini zokukhangela.
Phuhlisa umendo wakho ukuya kuthethathethwano ukulungiselela abafundi ukuba baye apho ufuna ukuba baye khona… ke ukusuka kumxholo wakho, ukuya kumnxeba wokuthatha amanyathelo, kwiphepha lokufika elilungiselelwe kakuhle apho unokulinganisa khona impendulo kwaye uguqule abafundi babe ngabathengi.
Ngokumalunga nenkqubela phambili enomdla, ndonwabe kakhulu ngenkqubela phambili yamaqonga anceda abathengisi ukuba basebenzise, ​​balawule kwaye balinganise amajelo abo eendaba ezentlalo kunye nezicwangciso zomxholo. Njengoko la maqonga eqhubele phambili ngakumbi, amaxabiso awo awakhange abe nawo. Sibona amaxabiso ehla kakhulu kule ndawo. Uninzi lwamaqonga atyebileyo anexabiso eliphakathi kwe- $ 250 ukuya kwi-1500 yeedola ngenyanga… kuluhlu lwemibutho emininzi.
Kuhle ukubona zokudlela Club Ukuntywila kwimithombo yeendaba ngoluhlobo- ngelixa beqala nje iindlela zabo zokuzonwabisa. Imibutho yeNkulumbuso enje inabathengi abafayo kwaye ibanjwe njengophawu lobume kwilizwe liphela. Ukwabelana ngamabali abathengi bazo kuya kugodusa indlela iklabhu yabo eyonyusa ngayo indlela yokuphila yamalungu abo.
Bukela ngakumbi udliwanondlebe
tags: kubloga kwequmrhuiklabhu yokutyadouglas karrUEduardo Tobonudliwanondlebesmmw 2013iindaba zentengiso yeendaba ezentlalo